Indlu esemaphandleni u-Luistokas - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni u-Luistokas
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTiina
Indlu esemaphandleni ekwizinga eliphezulu kwindawo epholileyo yamahlathi. Le ndlu isemaphandleni ineendawo zokuhlala ezitofotofo kakhulu. Indlu esemaphandleni ikufutshane neziko leholide laseJämi (iikhilomitha eziyi-1) apho kukho ihotele kunye nevenkile yokutyela. Yonwabela ihlathi elipholileyo, khetha izinto zokutya namakhowa okanye unyuke intaba okanye uqubhe. KwiJämi Snow World unako ukutyibiliza emkhenkceni kunye nokutyibilika ekhephini kwi-Ski handaki unyaka wonke. Kukho ithuba lokubona izinto ezinobungozi ezingakumbi kwindawo yaseJämi. I-Tampere ne-Pori zikwanazo neendawo ezibangel 'umdla zohambo losuku ezikwiikhilomitha eziyi-100.
I-Luertokas yindlu esemaphandleni ekwizinga eliphezulu enoxolo nokuzola kwamaphandle aseFinland. Ikwindawo enezinye izindlu ezisemaphandleni kodwa njengokuba iLuistokas ineyadi enkulu ungayonwabela nyhani indawo yakho.
I-Luertokas inamagumbi okulala ayi-2 kwaye ininzi indawo yokulala kumgangatho ongasentla.
I-Luertokas inezixhobo zasekhitshini eziqhelekileyo oza kuzifumana kwikhaya laseFinland. Ioveni yombane, i-microwave, ifriji/i-freezer, umatshini wokwenza ikofu, iketile yombane, i-toaster nomatshini wokuhlamba izitya. Kukho iintlobo ezincinci zezinto zokutya ezisisiseko kwindlu esemaphandleni onokuzisebenzisa. Ngokuqhelekileyo kulindeleke ukuba iindwendwe zibe nezinto zazo zokutya kodwa ukuba ulibele into onokuyisebenzisa kwindlu esemaphandleni.
Indlu esemaphandleni ilungele usapho. Kukho isango lokhuseleko ngoko abantwana abancinci abakwazi ukuya phezulu bengakhange bahoywe. Sinebhedi yosana onokuyisebenzisa kunye nesitulo sokutya sabantwana abancinci kunye nembiza. Kukho izinto zokudlala zabantwana kwindlu esemaphandleni Kubantwana kukho nendawo yokudlala eyadini.
I-Luistokas ikunika neholide emnandi kwabo baneziphene. Indlu esemaphandleni inokufikelela kakuhle kwabo banezitulo ezinamavili kwaye unokonwabela i-sauna kwisitulo esinamavili.
I-Luistokas ifumaneka eJämi Perhepuisto. Yindawo engcwele enezindlu ezisemaphandleni. Njengoko igama layo lithi ngesiFinnish lizilungele kakuhle iintsapho kuba ikumgama weekhilomitha eziyi-1 kuphela ukusuka kwiziko leJämi.
Iziko leJämi likwikhilomitha eyi-1 kuphela ukusuka kwindlu esemaphandleni. Kukho ihotele, iivenkile zokutyela, indawo yokujima, indawo yokutyibiliza kwikhephu, isikhululo seenqwelo-moya esincinci esenzelwe izinto zokuzonwabisa nezinye izinto ezininzi
I-Jämijärvi imalunga neekhilomitha eziyi-6 ukusuka kwindlu esemaphandleni. I-Jämijärvi inabantu abamalunga ne-2 000. Apho ungafumana ivenkile encinci yokutya, izikhululo zegesi, ukulungiswa kwemoto, iteksi kunye namayeza.
I-Ikaalinen imalunga neekhilomitha eziyi-30 ukusuka kwindlu esemaphandleni. I-Ikaalinen inabemi abangaphezu kwe-7 000. Uza kufumana iivenkile ezininzi kunye namaziko apho. Kuquka imarike enkulu. Unokukuvuyela ukutyelela i-Ikaalinen Spa edumileyo.
I-Tampere imalunga neekhilomitha eziyi-80 ukusuka e-Luertokas. I-Tampere sesona sixeko sikhulu sesithathu eFinland kwaye sinabantu abamalunga ne-147 000. Unokufumana zonke izinto onokuzilindela kwisixeko esinobukhulu obukhethekileyo.
Ndidla ngokwamkela iindwendwe ibe ndiyakwazi ukuyibonisa indlu esemaphandleni ndize ndincede ngemibuzo iindwendwe ezinokuba nayo. Ndingafumaneka ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho.